निरुको दुई कृति लोकार्पण तथा गीत सार्वजनिक – MEDIA DARPAN
Media Darpan Pvt. Ltd.	 पछिल्लो अपडेट Jun 21, 2022
काठमाडौँ/ काभ्रेकी बहुमुखी प्रतिभा निरु न्यौपानेको दुई कृति र एउटा गीत लोकार्पण गरिएको छ । सोमबार काठमाडौँको लेखनकुञ्जमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उपन्यास ’अर्को अध्याय’ र गजल ’सिरानीको तस्बिर’ लोकार्पण गरिएको हो ।
कार्यक्रममा प्रा.डा. सावित्री कक्षपति, साहित्यकार रेणुका सोलु, वरिष्ठ गजलकार ललिजन रावल, समालोचक ज्ञानु अधिकारी, कवि तथा गीतकार रमेश पौडेललगायत उपस्थित थिए । कवि तथा गीतकार रमेश पौडेलले निरु न्यौपाने एउटा राम्रो कलमका रुपमा चिनेको बताए । उनले काभ्रेले एउटा नयाँ सर्जक पाएकोमा काभ्रेलीहरुलाई बधाई दिए ।
कृति लोकार्पणका क्रममा काभ्रेली साहित्यको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दै न्यौपानेको उपन्यासमा नेपालदेखि विदेशीएको अनुभव रहेको र लेखक आफै पनि विभिन्न देश पुगेर संघर्ष गरेका कारण गहकिलो र पठनयोग्य किताब पाएको बाताए ।उनले एक पाठकका रुपमा उपन्यास पठनयोग्य रहेको बताए।
समालोचक ज्ञानु अधिकारीले उपन्यास पारिवारिक, मानव सम्वेदनाको कृति भएको बताइन्।’उपन्यासमा माया, विश्वास, सम्बन्ध मुख्य छ । एकपटक पढ्न बसेपछि उठ्न मन लाग्दैन,’ उनले भनिन् । उपन्यासमा महिला सम्वेदनालाई मिहिन ढंगले प्रस्तुत गरिनु तथा सबै पुरुष गलत नदेखाउनु लेखकको सबल पक्ष भएको उनले बताइन । समालोचक अधिकारीले ’अर्को अध्याय’ आधुनिक नेपाली उपन्यास भएको पनि बताइन्।
उपन्यास नेपाली महिलाको यथार्थ भएको साहित्यकार तथा समीक्षक रेणुका सोलुले बताइन् । ’अर्को अध्याय नेपाली महिलाले दुलही भएर भित्रिएबाट सुरु भएको विभेददेखिको कथा हो । यसले नेपाली समाज र महिलालाई प्रस्तुत गरेको छ,’ उनले भनिन्, ’पढ्दै गर्दा परिवारको सकारात्मक भूमिकाले नेपाली समाज त्यस्तै भए हुने नि लाग्छ।’
यौनमात्रै ठूलो कुरा नभएको, विदेशको भोगाइ, पितृसत्तामाथि उठाएको प्रश्न, बिहे आफैमा नराम्रो हैन, छोरालाई नैतिक शिक्षा दिनुपर्छ लगायतका कुराहरू उपन्यासको राम्रो पक्ष रहेको रेणुले बताइन् ।
यसैगरी ’सिरानीको तस्बिर’ गजल धेरै राम्रो गजल भएको वरिष्ठ गजलकार ललिजन रावलले बताए । ’उपन्यास लेख्नु जोखिम कुरा हो, लेखकले राम्रो काम गरेकी छन्,’ उनले भने, ’गजल पढेँ, यसमा विषयक विविधता धेरै छ । एउटा गजलकारको लागि राम्रो कुरा हो।’ उनले पाठकले गजलमा नौलोपन पनि भेट्ने बताए।
प्रा.डा. सबित्री कक्षपतीले गीत राम्रो बनेको बताइन् । ’लेखन उत्पादन हो, उत्पादन निर्माण हो । यसरी नै गीत, भिडियो निर्माण हुन्छ । भिडियो राम्रो छ,’ उनले भनिन् । उनले नयाँ लेखकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने पनि बताइन् । ’गजल, उपन्यास, कविता लेख्नु पर्छ । लेख्न खोज्नेलाई रोक्नु हुन्न, प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, लेखकको अझ कलम चलोस्,’ उनले भनिन्।
कार्यक्रममा सर्जक निरू न्यौपानेले आफूलाई किताब लेख्न समर्थन तथा प्रोत्साहन गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिंइन् । उनले आफू सानैबाट लेख्ने भए पनि अरूलाई नसुनाउने र नदेखाउने व्यक्त गरिन् । उनले विविध परिस्थितिले आफूले चाकेको समयमा कृति बाहिर ल्याउन नसकेको बताउँदै उनले अब भने निरन्तर साहित्य कर्ममा लाग्ने बताइन ।
कार्यक्रममा निरु न्यौपानेकै गीत ’हिसाब किताब’ बोलको गीत पनि सार्वजनिक गरिएको थियो । राज सिग्देलले गाएका हुन् भने सिग्देलकै संगीत रहेको छ । अनुप चापागाईको निदर््शन रहेकोे भिडियोमा गरिमा शर्मा र जीवन भट्टराई फिचर्ड छन् ।
प्रेम–कर्म फाउण्डेशनको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा सभापतित्व रामशरण न्यौपानेको रहेको थियो ।
गीतको लिंक ।
राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा प्रकाश मा.वि. प्रथम
बनेपामा हुनुहुन्छ! अनि तिर्खा र शौच लाग्यो,क्याफे दि…